Malunga nathi -Yantai Ramtec Engineering Machinery Co., Ltd.
Uhlobo loPhulo loPhulo
Cwaka Uhlobo Breaker
Uhlobo oluphezulu lweBreaker
Yantai Ramtec Engineering Oomatshini Co., Ltd. umenzi wobuchwephesha bokuphula hydraulic ngokudibanisa uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo. Inkampani ineemitha zesikwere ezingama-6,000 zemveliso esemgangathweni kunye ne-2,000 yeemitha zesikwere sendawo yeofisi, kunye neqela lobuchule labantu abangaphezulu kwe-100. kwangaxeshanye unenani lezixhobo ezichanekileyo zomatshini we-CNC, kunye neminyaka emininzi ebandakanyeka kuphando lwemveliso ye-hydraulic kunye nophuhliso lweenjineli, abasebenzi abaphezulu boomatshini, izixhobo zokulungisa ingxaki kubasebenzi bezobuchwephesha kunye nabasebenzi bendibano.
Umthamo wonyaka wenkampani ziiseti ezingama-3500 zoomatshini abagqibeleleyo.Kwangoku, iimveliso eziphambili zii-RAMTEC, i-RB, i-KOYAMA, i-KYB kunye nolunye uthotho lwe-hydraulic breaker, ikhefu lesanti eliphakathi, Iimveliso zilungele uninzi lwezinto zokumba ezingeniswa ngaphakathi kunye nezasekhaya ezixhasa ukusetyenziswa. Itekhnoloji yokuvelisa esemgangathweni, inkqubo egqibeleleyo yokuhamba kunye nolawulo olungqongqo lwenkqubo yemveliso njengesiseko, inkampani izinikele kwindlela yophuhliso lweemveliso eziphezulu, kwaye iyaqhubeka nokuthumela ngaphandle ekumgangatho ophezulu kunye nokuhlala ixesha elide izixhobo zokuqhekeza ngesanti kubunzulu baphantsi kushishino loomatshini bokwakha behlabathi.
Ukususela ekuqaleni kwenkampani, siye saseka umbono omkhulu ukuvumelanisa izixhobo isiphelo ophezulu-eziveliswe yi Ramtec kunye world.We siyazi ukuba ukuba sifuna ukufezekisa injongo yeqhinga lweshishini eminyaka ubudala, ulawulo olungqongqo lomgangatho Ukuqhubeka koyilo ukuya kwimveliso, ukusuka ekuthengeni izinto ukuya kuphicotho-zincwadi, ukusuka kuhlalutyo lomgangatho wamalungu ukuya kuvavanyo lwentsebenzo yomatshini uphela, abantu baseRamtec bahlala bebeka ulawulo lomgangatho. ekuqaleni
Ukuze sibe nabanikezeli bezinto ezifanelekileyo abazinzileyo nabazinzileyo, siphuhlise imigangatho engqongqo yokukhetha, izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni sisiseko esisisiseko semveliso yethu esemgangathweni.
Ishenxise ngokuqinisekileyo zonke iimveliso ezinesiphene yiRamtec bonke abasebenzi bahambelana nomgangatho womsebenzi.
Sinabasebenzi bolawulo lokugcina ngobuchule, ngenkqubo yolawulo lokugcina ekhuselekileyo nenocwangco, ukuze ibe likhonkco kwisebe ngalinye uqhagamshelo olufanelekileyo;
Iqela lethu lophando kunye nophuhliso olomeleleyo, ukuphucuka okuqhubekayo kunye nokuphuculwa kokusebenza kwemveliso, ukuqokelelwa kwangexesha kolwazi lokusetyenziswa kwabathengi, ngakumbi ngokuhambelana neemfuno zentengiso, kwenza ukuba kube nolawulo oluchanekileyo lweemfuno zentengiso.
Inkampani ikwanolawulo olukumgangatho ophezulu kunye nesebe lolawulo, ziyingcali, ziyasebenza, zinenkani ngokungqongqo; Ukusuka kwimpahla eluhlaza kumzi-mveliso, imigangatho yayo yolawulo lomgangatho, inyanzelisa icandelo labo eliphambili kuphando nakwimveliso yophuhliso, ukulawula ngokungqongqo inkqubo yemveliso, nganye Inkqubo kwinkqubo encinci yokujija ukufaka, enkulu kwindibano yonke yomatshini, umaleko phezu kocwangco, umgangatho, odityaniswe namava emveliso etyebileyo, ukusetyenziswa kwezixhobo eziphambili kunye nezixhobo zokulinganisa ngokuchanekileyo kunye nokubala, kunye nenkqubo yemveliso nganye yokujonga esweni iidigri ezingama-360.
Oomatshini beRamtec, ubunjineli bamandla amatsha, khawulezisa iphupha laseTshayina!
IDILESINO.157, FENGHUANGSHAN INDLELA, FUSHAN UMMANDLA YANTAI CITY, KWIPHONDO SHANDONG